🥇 ▷ Motorola sharad, oo ay ku jirto Hal Tallaabo, loogu talagalay 21: 9 qaab kamarad ficil ✅
Motorola sharad, oo ay ku jirto Hal Tallaabo, loogu talagalay 21: 9 qaab kamarad ficil
Motorola One Action ayaa imanaya, koox sida muuqata la mid ah kuwa kale ee horeyba loo heli jiray, laakiin leh kala duwanaansho aasaasi ah oo soo jiidan kara macaamiil aad u qaas ah oo macaamiisha ah: a camera GoPro-style camera
Kaamiradan, oo ku taal khaanadda dambe ee dareenka, waxay qabataa oo kaliya fiidiyow. Gaar ahaan, waxay ku sameysaa xalka HD buuxa, oo leh muraayad balaaran oo xagal kicinaysa dhalanrog isla markaana leh qaab 21: 9 – xitaa ka sii balaaran sidii hore.
Soosaaraha waxay xaqiijineysaa in kaamiradan ay qabatey ugu badnaan 117 digrii iyo nidaamkeeda xasilinta – elektiroonig ah, oo aan ahayn farsamo – waxay bixisaa natiijooyin ka wanaagsan jawiga xun marka loo eego nidaamyada farsamada caadiga ah ee soosaarayaasha kale ay ugu daraan taleefannadooda gacanta.
Motorola ayaa ku adkaysanaya taas Dareemahan ayaa awood u leh inuu qabto iftiin badan oo ku jira xaaladaha iftiinka xun. Tan awgeed waxay adeegsanaysaa tikniyoolajiyadda pixel binning, kaas oo isku daraya afar pixels oo isugeyn kara mid ka mid ah cabirkooda weyn (2 microns) iyo, sidaa darteed, awood u leh inuu qabto macluumaad dheeri ah.
Dhanka kale, oo ka duwan habka caadiga ah, looma baahna inaad telefoonka ku wareejiso 90 digrii si fiidiyowgu u noqdo mid siman. Taasi waa, fiidiyowga waxaa lagu duubay qaab muuqaal ah xitaa haddii taleefanka si toos ah loogu hayo. Tani waxay leedahay sharraxaad, sida laga soo xigtay Motorola: wuxuu fududeeyaa qabsashada aaladda ee xaaladahaas ba’an kaas oo laga filayo kamarad ficil in la isticmaalo.
Motorola waa qayb ka mid ah soosaarayaasha ku soo biiray fashionka shaashad caajis ah Xal u ah kamaradi hore.
Kaliya kaamiradiisa gaarka ah, Motorola One Action ayaa ku sharraxaya shaashadda wareegga ah ee 21: 9 qaab, 6.3 inji dhexroor cabir iyo qaraar HD buuxa. Gacanta ayaa xoogaa ka sarreysa tan qalabka kale ee caadiga ah, taleefannada ugu dhow ee sida ‘Xperia 1’ ee arrintaan.
Gudaha, Exynos 9609 ayaa la qariyey, oo la mid ah kii Galaxy A50, 4 GB oo RAM ah iyo UFS 2.1 oo kaydinta ah 128 GB awoodda. Xusuustaasi waa la ballaarin karaa iyadoo la adeegsanayo kaararka microSD illaa 512 GB.
Waxay ku gaartaa suuqa hal nooc oo ah 128 GB oo ah 279 euro.
Bateriga wuxuu leeyahay awood 3,500 mAh iyo waxaa dib loogu soo celin karaa iyada oo loo marayo nidaamka dallaca degdega ah oo gaaraya 15W. Sanduuqa, haa, soo-saaruhu kaliya waxaa ku jira 10 W ada ada – marka lagu daro USB-C cable iyo kiis hufan.
Kaameerada ugu weyn ayaa leh qaraarka ah 12 Megapixels waxaana weheliya ujeeddooyinka aperture f / 1.8. Tan waxaa taageeraya labaad 5 Megapixel xallinta khibradeed oo shaqadooda kaliya ay tahay qabashada qoto dheer ee qaababka toogashada sida sawirka.
Ku jihaysan adeegsadayaasha doonaya inay sii wataan kamaradaha kamaradaha kooxdooda sharadka ku ah xagal ballaadhanqaab cusub.
Dhinaca software, Hal Ficil sharadka on Android One, barnaamijka Google ee ku qasbaya soo-saareyaasha in ay si joogto ah u cusbooneysiiyaan aaladaha, muuqaalka muuqaalka badiyaa waa mid dhawrsan oo ilaaliya amniga taleefanka dhowr sano.
Tallaabada Motorola One Waxaa laga heli doonaa Spain laga bilaabo usbuucii ugu dambeeyay ee Ogosto. Qiimaheeda Yurub Waxay noqon doontaa 279 euro.
Nagala Soco Facebook ama gudaha Twitter in lagu ogeysiiyo saacadda ugu dambeysa ama haddii aad rakibtay Telegram of our channel rasmi ah inaanu seegin waxkasta oo aan daabacno.